Ndakanga ndakagara hangu pabar pachibva pasvika mumwe mukomana ainge ari handsome apa akasimba kunge anoita workout everyday. Akanditi ndikutengere drink here ndichibva ndati as long as usingazode kundisvirira drink iyoyo please, go ahead, takabva taseka hedu.Mukomana uyu akati anonzi Tim aigara around nebrother yake Tom vese vainge vasati varoora.
Inini zvandainge ndayendera kuclub uku ndaida kutsvaga munhu achandisvira nekuti ndainge ndakuvara nezemo musi uyu. Tim kept the beers coming at one point ndakaona ana Tim vari two ndikabva ndangozviti eish ndanwa doro too much ndisingazive kuti kwainge kuna Tim naTom.
Ndakapedzira ndayenda naTim because ndaiti kana ndanwa red wine yakawanda ndaiita rimwe zemo rekuti handaikwanisa kurara ndisina kusvirwa hameno kuti why but I noticed this everytime pandainwa doro. Ndakasvika kumba kwaTim vainge vaine two bedroom flat yainge yakanaka ndikangozviti vanofanirwa kunge vane mabasa aribho, I had not seen Tim’s brother but nekuona zvinhu zvaiva mumba mavo ndakaziva kuti these guys were well financed nekuti vainge vane zvinhu zvavo.
Ndakasvika tikayenda in his bedroom ndainge ndakadhakwa saka nguva yekubatana painge pasina ndichibva ndangobvisa hembe ndokupinda mublanket iye akatanga amboyenda mubathroom but haana kutora long ndokuuya kuzopinda mublanket next to me. Ndaingonzwa mboro yake ichiguma guma magaro inini ndainge ndatotota kare ndokumunzwa kuti arikupfeka condom ndokubva ayibayirira nekumashure ndikanzwa kubaiwa pachibereko chaipo ndichibva ndaridza mhere asi zvainaka ndakamuti arambe achisvira. Takapedza first round ndakaona munhu akakurumidza kumuka ndokubva abuda and a few minutes later akadzoka and mboro yake yanga yamira already akutoda second round. Semunhu ainge akadhakwa handina kuramba ndakasvirwa nemunhu aiita kunge asiriye abva kundisvira and ainaka kupfuura wekutanga ndokubva atunda inini ndichibva ndatundawo at the same time.